10 Toerana tsy mahazatra maneran-tany | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Toerana tsy mahazatra maneran-tany
Fiaran-dalamby Britain, Train Travel China, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby any Skotlandia, Fiaran-dalamby Spain, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 07/12/2021)
Ireo 10 hahatalanjona anao ny mahasarika tsy mahazatra maneran-tany. Cinderella miendrika fiangonana ombelahin-tongony avo, havoana fairy, tetezana mihantona, ary tionelina manokana any Angletera – dia vitsivitsy monja amin'ireo miavaka sy somary hafahafa, toerana mahaliana tokony hotsidihinao manerana izao tontolo izao.
1. Toerana tsy mahazatra maneran-tany: Ny lavarangana Juliet
Vitsy ny olona tsy mahafantatra fa tany Verona no nitrangan'ny tantaran'i Romeo sy Juliette. Ary, vitsy dia vitsy ny olona tsy mahazatra ny tantaram-pitiavana lavarangana sehatra. Ny iray amin'ireo toerana mahaliana indrindra hitsidihana an'i Verona dia ny lavarangan'i Juliet. Anisan'ny trano ny lavarangana, where a Cappello family lived in the 13th century. Na izany aza, ny lavarangana malaza dia nampiana ihany ny trano ao amin`ny 20tamin'ny taonjato faha-.
Ankoatry ny, ny lavarangana lasa iray amin`ireo malaza indrindra manintona any Eoropa. Raha ny lavarangana dia tsy nanana anjara toerana tena izy tamin'ny fametrahana ny tantaran'i Romeo sy Juliet, mahasarika mpitsidika an-jatony isan-taona. Raiki-pitia, vaky fo, mpanonofy sy mpankafy an'i Shakespeare, tonga mba hamela ny naotin'ny fitiavana, faniriana, ary graffiti eo amin'ny rindrina eo ambanin'ny lavarangan'i Juliet.
2. Fairy Glen, Nosy Skye
cone miendrika, havoana maitso silky, voahodidina dobo sy riandrano, Fairy Glen dia iray amin'ireo toerana tsy mahazatra indrindra hotsidihina ao amin'ny Nosy Sky. Na dia tsy fantatra aza ny fiavian'ny anarana tokana, Ny tontolon'i Fairy Glen dia manana hatsarana manokana.
Ny toerana tsara indrindra amin'ny fomba fijery mahafinaritra an'i Fairy Glen dia avy ao amin'ny Castle Owen. Ity toerana ity dia tsy tena lapa, fa vatolampy mitovitovy amin'ny rova ​​avy lavitra. Fairy Glen dia somary kely; noho izany, tsara indrindra ny manambatra azy amin'ny fitsidihana ny Kilt Rock, Old Man of Storr, ary ny Fairy Pools.
Ny tranombakoka zavakanto fluorescent voalohany eran-tany, ny Electric Ladyland attraction any Amsterdam dia iray amin'ireo 10 manintona tsy mahazatra any Eoropa. Na dia tsy mpankafy ny tranombakoka aza ianao, ity tranombakoka fluorescent ity dia traikefa lehibe ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ankoatra ny fanangonana miavaka ny fluorescent mineraly, Ladyland dia manolotra asakanto fluorescent mahagaga tamin'ny taona 1950. Ary, ny mpitsidika dia mahazo vintana sarobidy handray anjara amin'ny famoronana ny sangan'asany manokana, amin'ny hazavana miloko.
Ity fanintonana mahagaga ity dia ao afovoan'ny distrikan'i Jordaan any Amsterdam, izay misy lakaly maizina mamirapiratra amin'ny jiro miloko. Nomena anarana taorian'ny rakikira an'i Jimmy Hendrix Electric Ladyland, Ity fanintonana mahafinaritra ity dia momba ny zavakanto psychedelic sy mozika 70. Azo antoka fa, ny Electric Ladyland Museum any Amsterdam dia iray amin'ireo manintona indrindra eran-tany.
4. Ny Tunnel Bude, Cornwell Angletera
Tahaka ny tonelina plastika mahazatra ao amin'ny toeram-piantsonan'ny toeram-pivarotana lehibe any Cornwall, ny Tunnel Bude dia tena miavaka. Ity fanintonana tsy mahazatra ity dia iray amin'ireo ambony indrindra 10 manintona any Angletera noho ny jiro LED an'arivony mirehitra amin'ny loko maro.
Ao amin'ny tanànan'i Bude matory, ny 70 m tonelina dia mahagaga rehefa mirehitra. Ny fotoana tsara indrindra hahatongavana dia ny hariva, ho an'ny traikefan'ny hazavana farany. Raha toa kosa ny Tunnel Bude dia toa tsotra amin'ny antoandro, amin'ny alina dia lasa zava-mahagaga eran-tany, manintona mpitsidika manerana an'i Grande-Bretagne. Andalana ambany, ny Tunnel Bude dia mety ho a fijanonana mahafinaritra amin'ny dianao manerana an'i Eoropa, izay tena zava-mahatalanjona amin'ny teknolojia no manazava ny maso sy ny fon'ny tanora na ny antitra.
5. Toerana tsy mahazatra maneran-tany: Spreepark Germany
ny Berlin Parka fialana voly efa nahalala fotoana tsara kokoa, indrindra amin'ny faratampony ao 1969. Spreepark zatra nahasarika 1.5 mpitsidika an-tapitrisany, mitaingina azy 40 cabins 45 metatra Ferris wheel. Speerpark no toerana mahasarika indrindra any Alemaina Atsinanana mandra-pahatongan'ny fampivondronana indray 1991.
Amin'ny faratampony, Afaka mitaingina rollercoaster adala ny mpitsidika, Grand Canyon rano mitaingina, ary kaopy mihodinkodina goavana. Raha very laza ny valan-javaboary noho ny fahatapahan-jiro, ary ny fandaozana, Spreepark dia nijanona ho toerana mahafinaritra hitsidihana any Berlin. Ary, lasa iray amin'ireo toerana tsy mahazatra indrindra any Eoropa ny valan-javaboary nilaozana, azo idirana ary misokatra ho an'ny mpitsidika liana.
6. Tanànan'i Thames China
Tsy lavitra an'i Shanghai, avy amin'ny trano avo sy ny tempoly fahiny, dia hahita ody ara-javakanto hafa amin'ny sarin'ny tanàna anglisy ianao. Làlan-tsoavaly, fiangonana, kianjan'ny tanàna medieval, ary famantarana miarahaba anao any amin'ny Tanànan'i Thames.
Thames Town dia anisan'ny drafitra lehibe hananganana tanàna ambanivohitra iraisam-pirenena, nefa tsy tanteraka ilay drafitra. Noho izany, ankehitriny ny mpitsidika any Shanghai dia afaka mankafy ny sasany ny trano avo indrindra eran-tany ary mijanòna mandehandeha mitety faritra kely any Londres any Chine.
nahantona 100 metatra amin'ny rindrin'ny hantsana, Caminito del Rey dia iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra any Espaina. 2.9 km footbridge, 4.8 lalana fidirana km, ny 7.7 km ny halavan'ny Camino dia lalana serivisy mankany amin'ny tohodrano. Na izany aza, ankehitriny dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany mampientam-po indrindra eto Malaga.
Iray amin'ireo antony mahasarika mpandeha maro i Caminito ny toerana misy azy. Miorina amin'ny Los Gaitanes Gorge, hantsana miavaka misy vatosokay sy dolomita. Ary noho izany, na eo aza ny tetezana tery sy mihantona, Ny mahasarika tsy mahazatra Caminito del Rey dia iray amin'ireo toerana tsy maintsy jerena ao Andalusia, indrindra ho an'ireo tia adrenaline.
Nisokatra tao 2016, ny fiangonana fampakaram-bady vita amin'ny ombelahin-tongony avo dia mitazona ny firaketana Guinness ho an'ny rafitra miendrika kiraro avo indrindra eran-tany. Toerana fampakaram-bady malaza ny slipper vera goavam-be, saingy tsy misy asa ara-pivavahana. Na izany aza, ny sasany dia mety hilaza fa ny kiraro avo dia mitovy amin'ny kiraron'i Cinderella.
Ny fiangonana kiraro avo any Taiwan dia 17.76 metatra ny haavony ary misy mihoatra ny 300 vera miloko manga, mamela vokany manaitra ny mpijery azy. Ity fanintonana tsy mahazatra ity dia hita ao amin'ny Ocean View Park ao amin'ny tanànan'i Budai any Taiwan.
9. Toerana tsy mahazatra maneran-tany: Battle of Orange Italy
Ny karnavaly any Ivrea dia atao 3 andro alohan'ny Fat Talata. Ity fialantsasatra tsy manam-paharoa ity dia mitondra ny olona amin'ny manokana “ADY” lalana any Ivrea, mifanipy voasary. Na dia eo aza ny feo toy ny ady sakafo mahafinaritra, ny ady amin'ny voasary dia mety ho tena mahery setra, ary maro ny mpandray anjara no naratra sy naratra.
Vokatry ny hetsika mahery setra kokoa no namoronana ny fanintonana mahery setra. Voalaza fa nisy tovovavy iray nokapain’ny marquise ratsy fanahy taloha. Na dia tsy mazava aza raha misy marina amin'ity tantara ity, Na dia izany aza dia olona an-jatony no manatrika ny karnavaly voasary isan-taona. Noho izany, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo manintona tsy mahazatra indrindra any Italia.
10. Trano ambony ambany Fengjing Tanàna fahiny
Ity fanintonana tsy mahazatra ity dia fahitana tsy manam-paharoa ao amin'ny tanàna fahiny Fengjing. Malaza amin'ny lakandranony ilay tanàna tranainy malaza any Shina, ary hatramin'izay 2014 fantatra fa trano fonenan'ny trano Upsidedown. Rehefa miditra ao an-trano ny mpitsidika dia afaka mahita fanaka sy kojakoja ao an-trano, mitovy amin'ny trano ambony any Polonina.
Rehefa niditra tao an-trano, ho hitanao mivadika ny zava-drehetra, ka tsy ety ivelany ihany. Na dia tsy misy na inona na inona atao amin'ity attraction ity, tsy ho voasarika sy ho liana amin'ity endrika maritrano tsy mahazatra ity ny olona iray.
Izahay ao Save A Train dia ho faly hanampy anao handamina fitsangatsanganana amin'ireny 10 manintona tsy mahazatra manerana izao tontolo izao.
Tianao ve ny hampiditra ny lahatsoratray amin'ny bilaogy "Tsitrika 10 tsy mahazatra maneran-tany" ao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Funusual-attractions-worldwide%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#attractions mahazatra UnusualAttractions unusualattractionsworldwide